Kedu ngwa ngwa a na-ahụkarị maka ịsa ahụ - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Kedu ihe ndị a na-ahụkarị maka ịsa ahụ
1. Top ịgbaisi mmiri mmiri
Ịsa ahụ dị n'elu bụ ngwa a na-ejikarị eme ihe maka ịsa ahụ. N'oge gara aga, ịsa ahụ a na-eji aka dị n'ụlọ adịghị atọ ụtọ dị ka mmiri ozuzo n'elu. A na-ekewa mmiri ozuzo n'elu n'ime gburugburu na square. N'ozuzu, dayameta dị n'etiti 200-250mm. Ihe mejupụtara bọọlụ ahụ bụ ihe ABS, ihe ọla kọpa niile, ihe igwe anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ alloy.
Ikwu na akụkụ kachasị mkpa nke ịsa ahụ bụ isi ahụ nke ọkpọ mmiri. Ngwa ndị dị n'ime bụ ọkaibe, nke nwere ike ijikwa ụzọ mmiri niile nke ịsa ahụ, bụ nke kachasị nke nkesa mmiri, aka na isi ahụ. A na-ejikarị ọla kọpa mee isi ahụ nke ọkpọ mmiri. Ugbu a ụfọdụ ndị na-emepụta ihe nakweere isi igwe anaghị agba nchara, mana ọnụahịa dị elu. Igwe igwe anaghị agba nchara adịghị nkenke dịka ọla. Enwere isi valvụ arụnyere na nkewa mmiri. Ihe kachasị mma nke valvụ ugbu a bụ valvụ seramiiki, bụ nke na-eguzogide ọgwụ ma nwee ogologo ndụ ọrụ. Enwere ike ịgbanwuo ma gbanyụọ ya ugboro 500,000.
3. Ọkụ ịsa ahụ
A na-eji ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ alloy mere tube siri ike na-ejikọta faucet na nozzle n'elu. Igwe ịsa ahụ a na-ebuli ugbu a nwere tube nwere ike ibuli 20-35 cm n'elu ọkpọkọ ịsa ahụ. N'ozuzu, 30 cm n'elu isi a na-ewere dị ka ịdị elu bat nwere ezi uche. Ọ gaghị adị oke ala ma nwee mmetụta ịda mbà n'obi ma ọ bụ ọbụlagodi na ị zutere, ọ gaghị adị oke ala. Elu ka mmiri na-asọba gbasaa.
4. Igwe mmiri ịsa ahụ
Ọdọ mmiri na-ejikọta aka ịsa ahụ na ọkpọkọ bụ ihe mejupụtara igwe anaghị agba nchara, tube dị n'ime na njikọ njikọ, nke na-agbanwe ma na-agbatị. Igwe mmiri ịsa ahụ nke ngwaahịa ụfọdụ bụ plastik na-eguzogide okpomọkụ, nke a na-apụghị ịgbatị ma dị ọnụ ala.
5. Aka ịsa ahụ
Enwere ike ịsacha ya site na aka. Ọ na-adaba adaba maka ụmụaka na ndị agadi. A na-eji plastik mee ihe.
6. N'okpuru ọkpọkọ
Enwere ike ịgbagharị ya, a pụkwara ịdabere na mgbidi mgbe a na-ejighị ya mee ihe, a pụkwara ịtụgharị ya mgbe ejiri ya. Ọ dị mma karịsịa maka ịsacha akwa nhicha na uwe ime.
7. Obere oche
Ngwa ngwan'ihi na ofu ịsa isi na-adịkarị mere alloy.
Nke gara aga:Ebe azụta atọ nke eriri ịsa igwe igwe
Osote:Akpachara anya maka ntinye na nyocha nke eriri ịsa ahụ